कांग्रेसमा पुनर्ताजकी अभियान आवश्यकः डा. संग्रौला – RaptiSandesh
Home / Feature Breaking news / कांग्रेसमा पुनर्ताजकी अभियान आवश्यकः डा. संग्रौला
कांग्रेसमा पुनर्ताजकी अभियान आवश्यकः डा. संग्रौला
दाङ, २२ साउन
नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं महिला नेतृ डा. डिला संग्रौलाले काँग्रेसमा संगठन सुद्धिढिकरणका साथै पूर्नताजकीको अभियान थाल्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
रिपोर्टर्स क्लव दाङले आज तुलसीपुरमा आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले संग्रौलाले पार्टी भित्रको अन्तरघात र अनुशासन हिनताको कारणले कांग्रेस पहिलो पार्टि हुदाँ हुदै पनि स्थानीय तहमा दोस्रो स्थानमा आउनु परेको भन्दै अब आफूहरुले त्यस अभियानलाई लियर जिल्ला जिल्लामा हिडेको बताउनुभयो ।
नेपाली काँग्रेसले विभिन्न कारणले स्थानीय निर्वाचनमा धेरै स्थानमा पराजय भोग्नु परेको भन्दै अव कमिकमजोरीहरुलाई सच्याउदै प्रदेश र संघको निर्वाचनमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले अव काँग्रेसमा देखिएको यो भद्रगोलको अवस्थालाई अव हामिहरुले सुधार गर्नु पर्छ हैन भने पाटीमा अनुसासन हिनता बढदै जाने छ ।
त्यस्तै उहाँले देश भरिका महिलाहरुसँग भेटघाट र स्थानीय निर्वाचनको समिक्षाको लागि आफूहरुले अभियान थालेको भन्दै स्थानीय तहमा जितेकाहरुलाई बधाई र पराजय भोगेकाहरुलाई सहानुभुति दिएको बताउनुभयो । प्रदेशको चुनावमा ५० प्रतिशत अधिकारका साथै संघको चुनावमा महिला÷महिलाबीच खुल्ला प्रतिस्पर्धा आवश्यक भएको बताउनुभयो । त्यसैगरी उहाँले सरकारमा पनि ३३ प्रतिशत महिला सहभागीता हनुपर्ने आफुहरुको माग भएपनि सो हुन नसकेको बताउनुभयो । महिला संघकी पूर्व सभापति समेत रहनुभएकी संग्रौलाले स्थानीय तहमा महिलाहरुले केही अधिकार पाएको बताउनुभयो ।
रिपोर्टस क्लव दाङका अध्यक्ष शरद रेग्मीको अध्यक्षतामा भएको साक्षात्कारमा पूर्व संसाद उर्मीला थापाले संविधानमा महिला अधिकार सुनिश्चित भएपनि तल्लो तहमा समाजले आँफैपनि साथ नदिएको बताउनुभयो । उहाँले अब आफुहरु मिसन र भिजन सहित जिल्ला दौडाहमा लागेको भन्दै यसले संगठन सुधार हुने विश्वास व्यक्त गर्नु भयो ।
त्यसैगरी कार्यक्रममा महिला नेतृ महिला संघकी केन्द्रीय सदस्य निर्मला क्षेत्रीले महिलाहरुको ३३ प्रतिसत सहभागीता भने पनि सो व्यहारमा लागु हुन नसकेको भन्दै गुनासो गर्नु भयो । उहाँले संविधान जारी गर्दा एक भएका दलहरु हल विभाजन भएको भन्दै तिनै तहको निर्वाचन र संविधान कार्यान्वयन गर्दा सम्म सहमति र सहकार्यका साथ अगाडि बढ्नु पर्ने बताउनुभयो । साक्षात्कार कार्यक्रममा स्वागत कल्वका कोषाध्यक्ष बालाराम खड्काले गरेका थिए ।
Previous: फोहोर डायरी……(जे देखे त्यही लेखे)
Next: लाईसेन्सविना चलाईएका १७ मोटरसाईकल पक्राउ, चालकमध्य ११ जना विद्यार्थी पोशाकमा